Izingobo zomlando ze-INSOLITE - Thumela RELAY
Isidumbu esidumbile satholakala entshonalanga
brylandobe Agasti 13, 2020 0
Kutholakale isidumbu esidumbu esitholakala singenamuntu endaweni yesidumbu esitholwe isidumbu sitholwe ngoLwesibili endaweni engenamuntu emkhakheni weMetz-Queuleu, eMetz, eMoselle, ngokusho kwe-republican-lorrain.fr. Ungumhlali wendawo, ongaphazanyiswa ngu ...
Owasinda engozini yomoya eNdiya ulandisa ngemizuzu yokugcina yendiza
Umuntu osindile engozini yomoya eNdiya ulandisa ngemizuzu yokugcina yendiza Owasindayo engozini yendiza eledlule esifundazweni saseKerala eseningizimu ne-India, utshele i-BBC Tamil mayelana izikhathi ezinkulu ...
Umuntu ongaziwa ufile athole umgwaqo ngokuphelele eLe Havre
Umuntu ongaziwa ufile etholakale enqunu ngokuphelele emgwaqweni eLe Havre Indoda itholwe ingenalwazi ekuseni ngeLwesithathu ngo-Agasti 5, inqunu ngokuphelele futhi ilimele kabi, emgwaqweni esifundeni saseDollemard, eLe Havre (76).
Ingane eneminyaka engu-8 ubudala yaminza lapho kubhukuda
Ingane eneminyaka eyisi-8 ubudala iminza lapho kubhukuda Le ngozi yenzeke ngoLwesibili ntambama eChampdor-Corcelles, e-Ain. Ingane eneminyaka eyisishiyagalombili yeza ukugeza nodadewabo nabazali bayo ukugeza kwedolobha. Umfana u ...
UHusky uneminyaka engu-2 ubudala esihlathini
Ingane eneminyaka emibili ilunywe kanzima esihlathini nguHusky NgoMgqibelo, umndeni uhambele abangane eChâtelus-le-Marcheix, eCreuse. Ngokuka- francebleu.fr, lo baba ushiye izingane zakhe zodwa zodwa, eneminyaka emi-2 nengu-2,…
Ngomcebo wezinto ezibonakalayo nowezimali, ulahlekelwa yisibeletho sakhe
Tchinde Agasti 13, 2020 0
Uma ingcebo yezinto ezibonakalayo nezezimali iyisizathu sokuthi ushade, khona-ke ungashintsha umqondo wakho ngemuva kokufunda le ndaba eyethusayo. Owayengunkosikazi wendoda ecebile wanquma ukusho ukuthi wamlahla kanjani ...
I-XNXX: Ufuna zonke izindleko zomlisa ongamenza afinyelele ezulwini embhedeni.
Intombazane esencane ethi ivuka njalo ebusuku izwakala sengathi i-am0ur ithi idinga indoda empilweni yayo. Intombazanyana enhle ithi njalo emahoreni ama-2 ekuseni, ihlala i-horny nokuthi…
I-XNXX: Owesifazane uveza ukuthi inja yakhe ubengumngani wakhe omkhulu ngoba wayejwayele ukumenza…
Owesifazane wasitshela ukuthi inja yakhe yayingumngane wakhe omkhulu ngoba inja yakhe yayimenza umdlwembe. Le ntokazi ikhulume kanjena ngenkathi ikhala ngokulahleka kwesilwane sayo ithi ayisoze yabakhona umlingani ...
Uphulukisa ingubo yakhe bukhoma kwimibukiso ye-TV, kepha wayengekho ama-panties!
Tchinde Agasti 12, 2020 0
Ulahla ukugqoka kwakhe bukhoma kumibukiso ye-TV, ziningi iziyaluyalu zezinkinga ezibukhoma nezinye izinkinga zokubumba ezingabola idumela. Imvamisa kuba ngamantombazane nabesifazane abakhokha inani. Ngoba thina,…
Amawele amabili afanayo afuna ukukhulelwa ngasikhathi sinye, angalali ngaphandle kwelinye!
Igama lakhe ngu-Ana noLucy DeCinque futhi babhekwa "njengamawele afana kakhulu emhlabeni." Ngaphezu kwalokho, benza konke ndawonye baze bahlanganyele inhliziyo yomuntu ofanayo! Kungazelelwe, la mawele afanayo amabili afisa ...
1 2 3 olandelayo